Nohavaozinay ny Torolàlana momba ny Famerenana Mamoaka Lahatsoratra GV: Ireto no tokony ho fantatrao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2021 3:11 GMT
Araka ny fantatry ny maro amintsika, matetika misy votoaty avy ato amin'ny GV averin'ireo fikambanana na olona hafa avoaka. Omenay alàlana, ary raha ny marina dia amporisihanay io, satria manitatra ny iraka tontosainay amin'ny fanamafisana / fampilezana ny vaovao momba ireo lohahevitra resahana, ny olona ary ireo toerana izay tsy dia misy mpiresaka loatra na zara raha hita any anatin'ireo media mahazatra iraisampirenena.
Rehefa mifandray aminay ny olona momba ny hamerenana mamoaka ny asanay, dia alefanay mivantana mankany amin'ny pejinay Torolàlana momba ny Famerenana Mamoaka Lahatsoratra. Nohavaozinay tsy ela akory izao ilay pejy mba hampahazava kokoa ireo torolàlana, saingy nampianay koa sakelika iray antsoina hoe “Fandraisana anjara ho fanohanana ny Global Voices sy ny Creative Commons” izay manome fanazavàna betsaka kokoa momba ny dingana famoahana lahatsoratray sy ny dikan'izany ho an'ireo mpandray anjara ao amin'ny GV.
Ny lisansa Creative Commons ato aminay dia rafitra iray ahafahan'ny olona mamerina mamoaka ny asanay tsy mila akory mangataka fahazoandàlana isaky ny te-hampiasa, ohatra, iray amin'ireo tantara ato aminay ry zareo. Ny Creative Commons dia lisansa iray momba ny fizakàmanana izay ahafahan'ireo mpanonta sy mpamorona mametaka lisansa amin'ny asan-dry zareo, izay manoritra ny fomba azo ampiasàna indray ny asan-dry zareo.
Maro ireo bilaogera mamoaka ny asany amin'ny fampiasàna ny lisansa Creative Commons, toy ny ataon'ireo mpakasary izay mampiakatra ny sariny ho ao anatin'ireo sehatra toy ny Flickr sy ny Wikimedia Commons. Mampiasa ny lisansa Creative Commons ihany koa ny governemanta sasantsasany mba hahazoana antoka fa azo zaraina mora foana ny fitaovana avy amin-dry zareo.
Amin'izao fotoana izao dia ampiasàna ny lisansa creative commons daholo ny asa rehetra avoaka ato amin'ny Global Voices, izay ahafahan'ireo mpampiasa mamerina mamoaka indray maimaimpoana sy mampivady ireo tantaranay amin'ny votoaty hafa, fa fepetra fotsiny ny hoe mila omen-dry zareo lanja izahay, mifanaraka amin'ny fomba nangatahanay ho ataon-dry zareo.
Ny zavamisy hoe avelany ny hafa hampivady, hanova na hikirakira ny asanay dia mety ho toy ny fiovàna ifotony, saingy zavadehibe manokana io ho an'ny GV satria ny fandikàna lahatsoratra iray dia heverina ho toy ny endrika fampivadiana / fampifanarahana azy ihany koa.
Amorain'ilay lisansa ihany koa ny asa fanovàna ataon'ireo mpamerina manonta lahatsoratra amin'ny votoaty avy ato amin'ny GV mba hampifanarahana azy amin'ny endrika sy fenitra azy ireo—tahaka izay ataonay rahateo amin'ireo votoaty avy amin'ireo mpiaramiasa aminay amin'ny resaka famerenana mamoaka.
Amin'ny fitakiana hoe izay rehetra votoaty avy amin'ny Global Voices averina avoaka indray dia ampitondraina ny fanamarihana ery an-tampony amin'ny lahatsoratra milaza fa tao amin'ny GV no navoaka voalohany ilay lohahevitra, ampiana rohy iray mitondra mankany amin'ilay lohahevitra niaingàna voalohany, dia sady miaro ny tenanay izahay no miaro ihany koa ny lazanay.
Raha manana fanontaniana ianao aorian'ny namakianao ilay Torolàlana Momba ny Famerenana Mamoaka Lahatsoratra, iangaviana hifandray amin'izay mpikambana ao anatin'ny tarika mpitantana.
Isaorana anao ny fandraisana anjara amin'ny GV!
19 ora izayTaratasim-baovao